Maxaa la sameeyaa, iyo maxaad uga fogaan laheyd xeeladaynta keydka SEO ee istiraatiijiga?
Mawduuca waa boqorka. Anigu waxaan soo jeedinayaa soo jeedin noocaan ah marar badan markaad websaydhid. Oo waxay ka dhigan tahay dareen wanaagsan, waa inaan qiraa. Haysashada tayada tayada leh ee leh ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah waa laf-dhabarka loogu talagalay suurtagal kasta oo kumbuyuutar ah ee kobcinta dallacsiinta liiska Google ee SERPs (Search Engine Results Result). Marka la eego in qaybta libaax ee ganacsatada internetka ay fahmaan qodobbada muhiimka ah si ay u yeeshaan boggooda ay soo bandhigeen sadexda natiijadood ee ugu horreysa ee raadinta, hadda waa lagama maarmaanka u ah fulinta farsamooyinka keydinta habboon ee SEO keydinta macquul ahaan waa la aqoonsan yahay qof kasta oo la shaqeeya mashruuc ganacsi oo internet ah.
Search Engine Optimization marka hore waa
Haddaba, sida loo qaabeeyo istaraatiijiga saxda ah ee wax ku oolinta keyword SEO keywords? Waa hagaag, waxaan aaminsanahay in badanaa ku xiran yahay fikradda Mashruuca Optimization Search laftiisa, sida ay u shaqeyso, si sax ah. Taasi waa sababta, ka hor inta kale, waa in aan si sax ah u fahannaa sida natiijooyinka raadinta ugu caansan ee Google soo bandhigay, gaar ahaan marka la eego aragtida tiirsanaanta iyo qiimaha tartanka ee ereyada muhiimka ah. Hagaag, aynu tagno!
Ka fikir ereyada muhiimka ah marka laga reebo SEO-ga weyn
Ugu horreyntii, waa inaynu wajahnaa - haa, Optimization Search Mashruucan waa fikrad buuxda oo dhamaystiran oo daboolaysa dhinacyada badan ee khabiirku wuxuu caadi ahaan u baahan yahay xitaa ka badan shaqooyinka joogtada ah iyo waqti-qaadashada. Laakiin hadda waxaan ku nasan karnaa, maadaama laysku haleynayo qayb gaar ah oo lagu maareynayo istaraatijiyad wax ku ool ah oo muhiim ah oo SEO ah waa hawl aad u maamusho. Aniga ahaan, waxaan ku talinayaa in la isku dayo mowduucyada ereyada muhiimka ah ee ku shaqeynaya qaab macquul ah. Waxaan ula jeedaa inaad ugu yaraan isku daydo inaad adigu sameysid, adiga oo aan haysan wax caawimo khabiir ah. Waxaad u maamuli kartaa si hubaal ah. Kaliya maskaxda ku hay in keydinta keyword SEO ma aha adag tahay dhan. Dabcan, aan ka taxaddarno kuwa iyagu noqon lahaa "guriyaha" oo ku xiran internetka isku dayaya in ay soo jiitaan qof kasta oo macquul ah. Ka fogow ereyada qaylo-dheer ee cod-bixinta ah ee la falanqeynayo khibradoodii dhawaan la soo dhaafay, tusaale ahaan, ogaysiis gaaban oo ah casriyeynta ugu dambeysay ee raadinta algorithm oo kaliya oo ay bixiso Google.
Laakiin looma baahna inaan ku hayno wax ku saabsan wadada, ugu yaraan marka aan ku dhajino gareynta keyword keyword SEO keyword. Xaqiiqdii, waxaanu ku heli karnaa hab dhammaystiran halkan, oo kaliya oo ay wadaan qorshayaal ficil sahlan oo fudud. Waxaan u sheegi doonaa si hubaal ah, maadaama ay tahay hab lagu xaqiijiyay oo ay raacdo inta badan mulkiilayaasha cusub ee cusub iyo kuwa websaydhka ah - dhammaan waxay ubaahanyihiin waa adkaysasho xoog leh si ay u noqoto mid si qoto dheer udaba raacaysa aasaaska aasaasiga ah. Sidaa darteed, haddii aad dareentid inaad tahay mid aad u tartamaya, iyo waqti ku filan marka aad tuurayso - waad sameyn kartaa si aad u wanaagsan. Waxaan u jeedaa halkan si fudud ayaad u samayn kartaa habka ugu muhiimsan SEO keydinta, kaliya wuxuu hagaa mabaadi'da asaasiga ah. Sidaa daraadeed, hadda waxaan rabnaa in aan dhulka ku dhigno falalka asaasiga ah. Ka hor intaan wax kale jirin, yaanu sii wadno oo aan ka dhigno waxyaabahan soo socda:
Ka feker macaamiisha bartilmaameedka iyo ujeedooyinka dhabta ah. Isku day inaad fahamto waxyaabaha ama adeegga dadka ku dhex jira suuqa aadka u raadsanaya;
Samee liistada hubin buuxda ee ereyada muhiimka ah iyo keyfrases badanaa ay u badan tahay in la qaado dadka isticmaala dhabtaarka buuxinta weydiimaha raadinta. Ka dibna samee liis kale oo soo gudbin ah oo kaliya oo qoraya sheeko kasta oo la xidhiidha warshadaha ama fikradaha khuseeya. Marka la dhamaystiro, u qaado labadaba baaritaanada maskaxeed;
Sidan, waxaad arki doontaa mid kasta oo ka mid ah garaadka, ka dibna helitaanka liiska ugu dambeeya ee ereyada muhiimka ah oo si macquul ah uga. Taas ka dib, waa inaad haysataa laba-jeeg oo loogu talagalay erey kasta oo muhiim ah oo ku codsanaya Google si loo hubiyo in eray kasta oo raadinta uu leeyahay cayaar fiican;
Marka xigta, waa inaad siisaa tilmaamaha saxda ah matoorada raadinta, sida "ku soo dhowow" si ay u xagliyaan xaglahooda;
Ugu dambeyntii, waa inaan caawino Google ka helnaa xiriirka saxda ah ee u dhexeeya bogagga internetka iyo ereyada muhiimka ah ee ugu muhiimsan.
-ee aag dhul ah oo loogu talagalay istaraatejiyada naqshadeynta SEO-ga ee muhiimka ah si aan u bilowno, waxaan ugu dambayntii dib ugu celin karnaa qodobada muhiimka ah. Marnaba iskumid waqtigaada iyo dadaalkaaga si aad u hubisid liiska erayada muhiimka ah mar kale. Your content content wuxuu u baahan yahay oo kaliya ugu muhiimsan, laakiin ma aha hadalo muhiim ah tartanka si aad u sameyso guul dhab ah. Maskaxda ku hay, si kastaba ha ahaatee, markaad bilowdo inaad soo qaadato ereyga muhiimka ah ee SEO ee ficil-galinta, ma jiri doonto waxqabad si aad uga baxdo oo aad wax uga bedesho inta ugu badan ee sanduuqyada, ma aha in la yiraahdo dib u eegista liistada oo dhan marnaba ma dhigi doonto.
Wali ma hubin inaad dooranayso ereyada muhiimka ah si aad si fiican uga shaqeysid istaraatiijiga keydinta SEO-ga ee keydinta? Haddii ay dhacdo in aad la kulantid wax dhibaatooyin ah oo leh xulashada ereyga muhiimka ah, waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho liiska kooban ee soo jeedimaha (DO) ee leh digniino caadi ah (DON'ts):
liiska Do iyo DON'ts
Samee Daraasad Ku Saabsan Furayaasha
Sida horey loogu soo sheegey, samaynta cilmi-baaris habboon ee muhiimka ah wuxuu dhigayaa istaraatijiyadda istiraatiijiga SEO-ga ee ku habboon wadada saxda ah. Mar labaad - khaladaadka ama xumaha ayaa ah kuwo aan la aqbali karin halkan, maadaama ay si fudud kuu diidi karaan inaad ka dhigto qaar ka mid ah xiriirka adag ee u dhexeeya suuqa aadka ujeeda iyo magaca calaamadda ganacsigaaga. Haddii aad wali ka cabsanayso meesha aad ku bilaabi lahayd cilmi-baarista muhiimka ah, waxaad ka heli kartaa waxtar kuu leh inaad qorto liiska mawduucyo kale oo la xidhiidha warshadaha. Ama waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa boggaga bogga ee taagan
Waxaan u jeedaa inaad mar walba xor u tahay inaad isticmaasho khibrad dhab ah, laba ka mid ah dadkaaga soo horjeeda oo booqanaya boggooda internetka si ay u yeeshaan aragti macquul ah oo ku saabsan mowduucyada ay qabaan, iyo ereyada muhiimka ah ee soo baxaya had iyo goor. Sidan, codsashada eray gaar ah oo Google ah ayaa si deg deg ah kuu siin doona sawirka guud ee xiriirinta (tayada muhiimka ah) oo miisaankeedu ka soo horjeedo caannimada (tartanka). Xasuuso, tan macquul ah ee aan ahayn mid aad u badan oo la isticmaalay ayaa dhab ahaantii ah midka ugu awoodda badan.
Ha dooranin erayo muhiim ah
Ka fogow in aad ku lug lahaatid tartiib tartiib tartiib ah si aad uga sarreeysid ereyada muhiimka ah. Waxaad si fiican u isticmaali laheed ereyada muhiimka ah, sida kelidii hal keligeed marnaba lagama maarmayn. Haddii aad dareentid niyadjab, waxaad fiirin kartaa qaar ka mid ah shuruudaha raadinta ee la xidhiidha Google. Gawaarida bogga kowaad iyo ku darista qaadista erey la xidhiidha in lagu daro liiska ereyada muhiimka ah ayaa noqota xal fiican.
Ha isku duubin faa'iidooyinka maxaliga ah
Ha ilaawin inaad daboosho inta ka hadhay dhagaystayaasha. Goobtaada ganacsiga ka dhigo mid si fiican loo yaqaan Google, kaliya ku dar qaybta jimicsigaaga (e. g. , magaalada, magaalada, ama gobolka) xulashada ereyada ugu muhiimsan. Iyaga oo la xariira macaamiisha aadka loogu talagalay oo dheeraad ah, ganacsigaaga ayaa hubaal ka faa'iideysan doona keydka muhiimka ah ee SEO-ga gobolka. Ha iloobin inaad wakhti ku qaadato liiskaaga degaankaaga Google, iyo meel kasta oo kale si aad u hesho darajada sare ee SERPs si aad u bilowdo suuqyada maxaliga ah mar iyo marba Source .